Waa maxay Aasaasiyadoodu way ka Baran kartaa Cilmi-baarista Cusub ee Cod bixinta
Maqaalka soo socda ayaa markii hore daabacay Dabacsanaanta Philanthropy on September 10, 2018. Halkan waxaa lagu daabacaa ruqsad buuxa.
Waxaan ku noolnahay waqti kala-go'an iyo isdaba-marin diimeed oo xoojiya kalsoonida hay'adaha muhiimka ah ee dimuqraadiyada Mareykanka. Si loo cusboonaysiiyo loona xoojiyo siyaasadeena iyo maamulkeena, waxaan u baahanahay faham qoto dheer oo ku saabsan sida dadka Maraykanku u arkaan dhibaatooyinka saameynaya dalka iyo waxa ay qaadan doonaan si ay u dhisaan fikrad ballaaran oo ku saabsan dhibaatooyinka iyo hagaajinta labadaba.
Tani maaha jimicsi ku dhisan falsafadda platonic; waa hab wax ku ool ah oo lagu hormarinayo hawlaha dawladda ee kuwa u adeega.
Dhinaca kale, Joyce, Kresge iyo McKnight aasaaskooda - oo dhan oo ku yaala degaanka Gobalka Weyn ee Great Lakes - waxay si wadajir ah u taageerayaan mashruuc doorasho iyo joornaali ah si loo baadho dabeecadaha Maraykanka ee ku saabsan saddexda tiir ee dimoqraadiyada caafimaadka leh: sahlanaanta helida cod bixinta, ka qaybgalka muwaadiniinta iyo dhaqdhaqaaqa, iyo ka go'naanta bulsho-dhaqameedyo kala duwan.
Daraasadan, oo ay fulisay Machadka Cilmi Baarista Dadweynaha, waxaana lagu falanqeeyay sheekooyinka saxaafadeed ee ay soo saareen Atlantic, si qoto dheer u baadha su'aalaha muhiimka ah: Halkee bay ku jiraan khadadka khaladka ah ee dimuqraadiyada Mareykanka? Maxaan sameynaa si aan u dayactirno? Sidee baan u xoojin karnaa Jamhuuriyadda?
Maxaan illaa iyo hadda ka baranay? The sahanka hore, "Caqabadaha Voter Knowledge, Participation, and Polarization," waxay indho-indheyn ku aragtay aragtida Maraykanka ee ku saabsan nidaamka doorashada Maraykanka iyo caqabadaha ay wajahayaan. Qaar ka mid ah natiijooyinka waxay xaqiijinayaan waxa aan hore u ogaanay: waddada isbedelka xawaaraha, iyada oo la adeegsanayo qaybo fara badan, jinsi, iyo qowmiyado kala duwan oo qaabeeya sida ay dadku u arkaan dhibaatooyin saameynaya nidaamka doorashada Maraykanka.
Calaamado rajo ah oo qaarkood
Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray wax la yaab leh. Mid ka mid ah taageerada ballaaran ee lagu qeexay samaynta siyaasado gaar ah si loo ballaariyo helitaanka cod-bixiyeyaasha, iyada oo samaysa diiwaangelin cod-bixineed fudud, tusaale ahaan. Waxaan fileynay taageerada noocan oo kale ah in ay jebiso khadadka qaybta. Natiijadu waa calaamad rajo leh oo ah in kala qaybsanaanta xisbiyada siyaasadeed ee ku saabsan fududeynta diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha aan lagu dabooli karin codbixiyayaasha.
Inkastoo 66% dadka Maraykanku ay sheegaan in saamaynta hantida iyo shirkadaha hodanka ah ay tahay mushkilad wayn, qoto dheer oo qoto dheer ayaa muujinaysa in Democrats ay ku dhowdahay laba jeer oo ay u badan tahay in Jamhuuriyeyaashu ay ku heshiiyaan qiimeyntaan (82 boqolkiiba illaa 42 boqolkiiba ).
Muuqaal warbaahin ah oo ka dhan ah musharaxiinta qaarkood ayaa loo tixgeliyaa dhibaato boqolkiiba 57 ka mid ah kuwa la daraaseeyay. Dhinaca hoose ee dusha sare iyo waxaad ka helaysaa, mar kale, qaybta qaybinta: 81 boqolkiiba Jamhuuriyeyaashu waxay tixgelinayaan xag-jirnimada saxaafadda, iyada oo laga soo horjeedo 41 boqolkiiba oo ka mid ah Democrats.
Su'aalaha ku saabsan codbixiyeyaasha xaqa u leh ayaa loo diiday inay xaq u leeyihiin inay codeeyaan khiyaano kale, midkani wuxuu ku yaal khadadka jinsiyadaha: Ku dhawaad 62% dadka Maraykanka madow iyo boqolkiiba 60 dadka Latino-Mareykan ah ayaa sheegaya in ay tahay dhibaato weyn, laakiin 27% dadka Maraykanka ah ayaa aqbalay. Codsiyada khibradaha codbixinta, codbixiyayaasha madow iyo Latino waa laba illaa seddex jeer oo ay u badan tahay in codbixiyeyaasha caddaanka ah ay sheegaan inay dhibaatooyin haystaan markii ugu dambeysay ee ay isku dayeen inay codeeyaan.
Heshiiska Bipartisan, ee Meelaha
Inkasta oo qaybo kala duwan iyo midab-takooreedyo, waxaa jira qaybo ka mid ah heshiiska dhexdhexaadinta. Nasiib darro, mid ka mid ah waa kuwa ra'yiururinta ku tilmaaman sida "qeylo-dhaan" wax aan hubin oo ku saabsan sharciyada doorashada gobolka. Qoraal aad u dhiirri-galin ah, ayaa Maraykanku ku waafaqsan yahay in dadku aad u yar yihiin dhibaatada ugu weyn ee dimuqraadiyadeena, waxayna si ballaaran u taageertaa siyaasado kala duwan si loo kordhiyo helitaanka cod-bixinta.
Haddaba sidee ayay u helitaankani u bilowday hage bixiyeyaasha iyo u doodayaasha doonaya in ay ka caawiyaan samaynta dimoqraadiyada Mareykanka? Waxa aan ka soo baxnay cilmibaarista ilaa hadda waxay soo jeedinayaan ugu yaraan saddex waddo siyaasadeed:
Waxbarashada codbixinta. Tirada badan ee codbixiyayaasha waxay muujinayaan shaki la'aan ku saabsan sharciyada codbixinta ee dalalka, taas oo soo jeedinaysa baahi loo qabo in dadweynaha iyo waxbarashada la sii wado. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay gobollada beddelay sharciyada codbixinta sanadihii ugu dambeeyay, badanaaba waxay ku darayaan jahawareerka iyo abuurista caqabado cusub si ay uga qaybqaataan. Haddii aan rabno inaan kordhinno kaqeybqaadashada cod-bixiyeyaasha, meel wanaagsan oo lagu bilaabi karo ayaa caawinaya codbixiyayaashu in ay raacaan waxa ay u muuqdaan in ay u arkaan qawaaniinta jahwareerka.
Yaraynta sinaan la'aanta. Ra'yiga ayaa xaqiijiyay waxa dad badani haystaan ra'yiga dhabta ah ee runta ah: Dhammaan dadka Maraykanka ah looma daaweeyo isla markii ay isku dayayaan inay codeeyaan, taasina gaar ahaan kiisaska jinsiyadaha.
Waxaa jira xalal lagaga hor tagi karo sinaan la'aanta. Xalalka waxaa ka mid ah la shaqeynta saraakiisha doorashada si loo wanaajiyo tababarada shaqaaleeynta si loo yareeyo khiyaamada; iyada oo bixinaysa ilaalin ballaaran oo cod-bixiyayaasha ah oo ku nool bulshooyinka leh heer aad u sareeya oo ah codbixiyayaasha midab; iyo dhiirigelinta maamulka dawladda dhexe iyo gobolka si loo xoojiyo kormeerka iyo hirgelinta sharciyada mamnuucista cod-bixiyayaasha.
Hagaajinta helitaanka cod-bixiyaha. Ra'yiga wuxuu helay taageero ballaaran oo loogu talagalay siyaasado kala duwan si loo kordhiyo helitaanka cod-bixiyeyaasha, sida u oggolaanaya horey xabsiga loogu soo rogay, muwaadiniintii ku soo noqdeen si ay u codeeyaan.
Isbeddel kale oo la ansixiyay ayaa si toos ah u diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha marka ay muwaadiniintu ganacsi ka sameeyaan Qeybta Gawaarida ama hay'adaha kale ee gobolka. Sidoo kale caan ah, laakiin marar dhif ah oo yar, waxay u oggolaanaysaa dadka inay isdiiwaangaliyaan oo ay codeeyaan isla maalintaas.
America waxay ku taallaa marxalad gaar ah oo muhiim u ah taariikhdeeda. Aan ku qabanno waxa aan ka baran karno cilmibaaris sidan oo kale ah si aan u fahanno halka laga yaabo in la qiimeeyo qiimaha iyo caqiidooyinka lagu xoojinayo dimuqraadiyaddeenna, ama ugu yaraan calaamadaha tilmaamaya jihadaas, ka baxsan qaybaha fiiqan.
Ellen Alberding waa madaxweynaha Joyce Foundation, Kate Wolford waa madaxwaynaha McKnight Foundation, Ari Simon waa madaxweyne ku xigeenka iyo barnaamijka madaxa iyo istiraatiijiyadda istaraatiijiga ee Kresge Foundation.